पशुपति शर्माको “लुट कान्छा लुट” नामको गीतमा बद्री पंगेनीले दिए यस्तो प्रतिकृया !
काठमाडौं । पशुपति शर्मा पछिल्लो समय नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहन सफल नाम हो । लुट कान्छा लुट नामको गीत बजारमा ल्याएर त्यसलाई फेरि डिलीट गरेपछि उनको चर्चा थप चुलिएको छ । उनको गीतले भ्रष्ट्रचारीहरुको कडा आलोचना गरेको र यसको सिधा असर सरकारलाई दिन खोजेपछि अहिले विरोध अनी सर्मथन दुबैं देखिएको छ ।
यस्तै, लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बद्री पंगेनीले पशुपति शर्माले गीत हटाएर ठिक गरेको बताएका छन् । विवादमा आएको गीतलाई युट्युबबाट हटाएर पशुपतिले राम्रो गरेको पंगेनीले बताए । उनले भनेका छन् ‘पशुपति जीले पहिला पनि विकृतिविसंगती, भष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ । यसपालीको गीतमा भने केही शब्दहरु परिमार्जित गरेर फेरी अप्लोड गर्ने निर्णयसहित गीत डिलिट गर्नु भयो ।”
उनले भने, “मलाई लाग्छ, उहाँले जे गर्नु गरिराख्नु भएको छ, ठिक गर्नु भएको छ ।’ पशुपतिको निर्णयमा नै प्रतिष्ठानको पनि सहमत रहेको उनले बताए । ‘यो घट्नाप्रति पशुपति जीलाई जे लाग्छ संघलाई त्यही लागेको छ । उहाँ फेरि गीत अप्लोड गर्ने तयारीमा हुनुहन्छ’। पशुपतिले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट गीत हटाएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘लुट्न सके लुट’ भाइरल नै भएको छ ।
युवतीको घेरामा प्रदीप हलमै रोईन जसिता, यस्तो छ ‘लभ स्टेशन’ को हल रिपोर्ट (भिडियो)
‘द कपिल शर्मा शो’ बाट एक्कासी किन हटाईए सिद्धू ? सिद्धुको सिटमा अब अर्चना
गीत हटाएपछि पशुपति शर्माले पुनः दिए यस्तो प्रतिक्रिया
माग्नेको व्यंग ‘कलियुग लागेपछि उल्टो बग्छ खोलो, पशुपतिमा ओइरिएछ अरिङ्गालको गोलो’
माफी माग्दै पशुपति शर्माले हटाए विवादमा तानिएकाे गीत
लाजनारायणको मार्मिक राजीनामा-पत्र : ‘घुस खाएको होईन, टेष्टमात्र गरेको हुँ !’